voanjo Factory - Mpanamboatra voanjo any Shina, mpamatsy
ny voanjo flange dia iray amin'ireo voanjo mahazatra indrindra ary ampiasaina amin'ny vatofantsika, kofehy, visy, tsongo, tsorakazo misy kofehy ary amin'ny fatorana hafa izay misy kofehy milina. Ny flange dia midika fa manana flange ambany izy ireo.
Ny Metric Lock Nuts dia samy manana ny fiasa izay mamorona hetsika "fanidiana" tsy maharitra. Ny lozisialy Torque Lock izay misy dia miantehitra amin'ny fiovan'ny kofehy ary tsy maintsy simbaina sy tapaka; tsy voafetra ny simika sy ny mari-pana toa ny Nilon Insert Lock Nuts fa ny famerenana mampiasa dia mbola voafetra ihany.
Ny voanjo hex dia iray amin'ireo voanjo mahazatra indrindra ary ampiasaina amin'ny vatofantsika, kofehy, visy, kofehy, tsorakazo misy kofehy ary amin'ny fatorana hafa izay misy kofehy milina. Hex dia fohy amin'ny hexagon, izay midika fa manana sisiny enina izy ireo
Din6921 Flange Nuts, Boloky Hex Bolts mainty, Bolida heksim-by hex mainty, Hex Bolts mahery, Hexagon Socket Head Bolts, horonan,